South Africa: Dadkii ugu horreeyey oo u dhintay Coronavirus
The ultrastructural morphology exhibited by the 2019 Novel Coronavirus
South Africa ayaa Jimcaha maanta ah xaqiijisay labadii kiis ee cudursidaha coronavirus uu ku dilo dalkeeda xilli kiisaska dadka uu fayrasku ku dhacay ay kor u dhaaftay kun qof, lana billaabay in si adag loo xayiro dhaqdhaqaaqa dadka muddo saddex toddobaad ah.
Wasiirka caafimaadka dalkaasi Zweli Mkhize ayaa xaqiijiyay geerida labadan bukaan, isagoo sheegay in labaduba ay ku dhinteen gobolka Western Cape.
South Africa ayaa diiwaangelisay in kabadan 1,000 kiis oo Coronavirus ah iyadoo ah dalka ugu badan ee uu xanuunka dhibaatada ugu daran ku hayo qaaradda Africa oo dhan. Gabi ahaan qaaradda ayaa soo warisay isku dar 3,000 oo qof la xaqiijiyay inay qabaan Coronavirus.
Xayiraadda isku socodka dadka ee dalkaasi ka dhaqan gashay maanta ayaa loo arkaa iney tahay tii ugu adkeyd iyadoo dadka loo oggol yahay oo qura iney guryahooda uga baxaan si ay u soo iibsadaan raashin ama u tagaan farmashiyeyaasha.
Xuduudaha South Africa ayaa horey looga xiray gaadiidka dadka daabula, hase ahaatee waxa ay u furan yihiin xamuulka sida sahayda daruuriga ah sida raashinka.
Xannibaadda la saaray dalkaasi ayaa ka badnaan karta 21 cisho haddii ay xaaladda coronavirus sii socoto.